. ကော်နီ နှင့် သူ၏ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » . ကော်နီ နှင့် သူ၏ …	14
. ကော်နီ နှင့် သူ၏ …
Posted by မြစပဲရိုး on Aug 1, 2015 in Food, Drink & Recipes | 14 comments
.ကော်နီ ဆိုတာ ကော်ဖီထုတ်နီ (Red cabbage) ကို ခေါ်တာပါ။
. မြန်မာပြည်မှာလဲ တွေ့လိုက်တယ်။
ခရမ်းရောင် လို အရောင်တွေ ထွက်လို့ ဆေးဆိုးထားတဲ့ အတုကြီး လို့လဲ ထင်ကြတဲ့ သူတွေလဲ ရှိတယ်။
Red cabbage ဆိုပေမဲ့ အနီရောင် အစစ် မဟုတ်ဘဲ ခရမ်းရောင်ဘက်ကို နွယ်တယ်။
အဲဒါကို Salad လို စားကြပါတယ်။
အခု နည်း က ဘေကွန် နဲ့ ကြော်လိုက်တာပါ။
အညွန်းထဲ ရှာလကာရည် ပါ ထည့်ခိုင်းလို့ ထည့်ထားပါတယ်။
. ဘေကွန်က အငံ နဲ့ ရှာကကာရည် က အချဉ် ရသ နှစ်မျိုး ပေါင်း ပြီး စားလို့ ကောင်းတယ်။ (ကြိုက်ရင်ပေါ့)
ဘာမှ မရှုပ်တဲ့ ရိုးရိုးလေး ကို ရှူ “စား” တော်မူကြပါ။
(ဓာတ်ပုံထဲ က ဒိတ်မှား နေတာ Ignore လုပ်ကြပါ။ ဘက်ထရီ လဲ ပြီး ဒိတ်ကို setting ပြန်မပြောင်းလိုက်မိလို့)
ကော်ဖီထုပ် နီ နဲ့ ဘေကွန်
Red cabbage ကို ထက်ခြမ်းခွဲ တော့ ဒီလို တွေ့ရမယ်။
ဘေကွန် ထဲ ထောပတ် နဲနဲ ထည့်ပြီ ကြော်တယ်။
ပြီးတော့ ကော်နီ အလှည့်
ရှာလကာရည် ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်းလောက်ထည့်တယ်။
Ready to eat :-))
ဒါက Basil အပင်။ အိမ်မှာ စိုက်ထားတာ။ ပင်စိမ်း လို အရသာပါ။ ယိုးဒယား လို ကဖောင် ခေါ်မလား မသိ။ ထမင်းထဲ ထည့်ကြော်တဲ့ ဟာလို့ ပြောတာဘဲ။
Ma Ma says: ကော်နီဆိုတာနဲ့ ကိုကိုချစ်ကို သတိရမိတာ မှားသွားပြီ။ မလတ်ရဲ့ ကိုကိုနပ်နဲ့အပြိုင်
မမရဲ့ ကိုကိုနပ် ချက်ဖြစ်တယ်။
လာမည် မကြာဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 672
YE YINT HLAING says: ကော်နီ ဆိုတောာ့ ကော်နီလားလို့
” Ready to shalutt “
မြစပဲရိုး says: မမ နဲ့ မောင်ရဲ
တကယ်တော့ ကော်နီ လဲ ကြိုက်ဖူး။ ဂေါ်ဖီ လဲ ကြိုက်ဖူး။ :-))
@QUIL@ says: ဒေါ်စုကို ဗီလိန်ထားပီး …. အူးတန်းချွေကို မင်းသားဇာတ်ယုတ်နဲ့ ၀တ္ထုတပုဒ်လောက်ရေးပါလား….မာမီ
ဂေါ်ဘီ တောင် ကော်နီဖြစ်အောင်ပြောတာ….
မြစပဲရိုး says: မင်း အရီး ဘဲ ကွယ်။ ဂလောက် တော့ မှီ ရမပေါ့။
ဗီလိန် ထဲ ကိုအံ့ကျော် ကို မြင်တယ် မဟုတ်လား။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဗီလိန် နေရာထားလဲ လူ တွေ က ချစ်မှာဘဲ။
Alinsett @ Maung Thura says: .အခု ခေတ်စားနေတဲ့ ”ကော်ရှူ”တွေ အကြောင်း
အရီးဆီက တစ်ခုခု ဖတ်ချင်လိုက်တာ
မြစပဲရိုး says: ဘာတုန်း။
အရီး ကဘဲ “ကော်ရှူ” နေသယောင်။
Alinsett @ Maung Thura says: အဟီး အဲ့လို ဖြစ်သွားရင် ဆောရီးဗျ
အဲ့ ကော်ရှူလေးတွေအကြောင်း ဖတ်မိ ကြားမိပြီး
ရင်ထဲ ကလိကလိနဲ့ ပြောချင်တာတွေ ရှိလာပေမဲ့
ချက်ကျလက်ကျနဲ့ သိုင်းဝိုင်းလည်း မပြောတတ်
.ပြောချင်သလောက်ကို ကျနော်ပြောရင် ရေးရင်ပေါ့လေ မပီကလာပီကလာလေး ဖြစ်နေမှာမို့
အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ချက်ကျလက်ကျ ရေးပြ တွေးပြ ပြောပြနိုင်တဲ့ ချစ်သောအရီးလိုတစ်ယောက်ယောက်က ရေးမှာကို သာ ဖတ်ချင်လာလို့ပါ။
ဘာရယ်မဟုတ် ကော်နီဆိုတာကို လူ အဆိုတော်မမ
.ကော်ကော် မဟုတ်ပဲ အခြားဟာ ဖြစ်နေတာ တွေ့ပြီး အခြား ကော်ကော်ကို ဆက်စပ်တွေးမိသွားတာပါလို့စ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီ ဂေါ်ဖီ ကို ခရမ်းရောင်ဖြစ်နေတဲ့ အမှု နဲ့ကို မစားချင်တာပဲ။ ဟိ။
စားစရာ အရောင်နဲ့ မတူလို့။
ဦးကျောက်ခဲ says: ကော်နီဆိုလို့ အပြေးလာတာ…
အမှတ်တရ ပြောရရင် အဒေါ်ရဲ့ခြံနောက်မှာ ကော်နီငှါးနေတုန်းကပေါ့…
ဒရိုင်ဘာလိုတယ်ဆိုလို့ ကျောက်စ်လည်း မှင်သေသေနဲ့သွားလျှောက်ဖူးတယ်…
“မောင်လေးရယ် မင်းကလည်း ကိုယ့်အမကို စ စရာရှားလို့… ကောင်စုတ်လေး” တဲ့ … ဟီ ဟိ
အဲ… အဲ… ဟို မဲနယ်ရောင် ဂေါ်ဖီထုပ်တော့ မစားချင်ဘူး… စားစရာနဲ့ မတူလို့… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဆိုတော့ ကော် နဲ့ ကျောက်စ် အမျိုးပေါ့။
အခုထိ အပျိုကြီး ဘဲ ဟုတ်။
ဇီ နဲ့ ကျောက်စ် လိုပါဘဲ။ သများ လဲ ဒီလို အဆန်း ချက်ပြဖို့သာ စီစဉ်ခဲ့တာ။
သိပ်မကြိုက်။ အရေးထဲ ရှာလကာထည့်တာ များသွားလို့ ချဉ်ပြီး နေလို့ မကုန်နိုင်သေး။ lol:-)))
kai says: နားလည်ထားသလောက်တော့.. အဲဒီခရမ်းရောင်အသီး..အရွက်..ဥ.. အမျိုးတွေဟာ.. ပိုဈေးကြီးပြီး.. လူအတွက်အဟာရပိုဖြစ်တာပဲ..
ဂငယ်ဂျပန်တွေအတွက်တော့.. မစားခင်..မျက်စိအလှဆင်ရာမှာ.. တန်ဆာလည်းဖြစ်ရဲ့..
တလောက.. မိတ်ဆွေတွေအလှူတခုလုပ်တာမှာ.. လေဒီခိုင်က.. ကြက်သားသုတ်ပါဝင်ကူဆွမ်းကပ်ချင်တယ်ဆိုလို့.. ကျုပ်လည်း.. လှအောင်အဲဒီခရမ်းဂေါ်ဖီကို..ဂေါဖီအဖြူနဲ့ရောသုံးခဲ့တာ…
Ma Ei says: အဲ့ဒီ ကော်နီ ဂေါ်ဖီထုပ်ခရမ်းရောင်လေးတွေ ဒီမှာလဲတွေ့နေရပီ
ဒါပေသိ ဈေးကြီးတာမို့ ချက်လိုက်ရမှာ နှမြောတာနဲ့ မစားဖြစ်သေး
အလှဆင် အနေနဲ့ အသုပ်တို့ sandwich မှာဖြူးတာတို့အတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားသား
အောင် မိုးသူ says: အဲ့ဂေါ်ဖီထုပ်ကို မစားဖူးသေးဘူး။ ကျတော်ကလည်းတစ်မျိုး ငရုတ်သီးတောင် စင်ကာပူက ငရုတ်သီးမှုန့် ရဲရဲတွေကို လုံးဝမကြိုက်ခဲ့သေးတာ။ ဂေါ်ဖီဆို စိမ်းစိမ်းလေးပဲပိုကြိုက်မိ။ ခရမ်းရောင်က ပိုနူးညံ့တယ်လို့ လည်း ပြောကြတယ်။